I-ANC eKZN ayishodelwa abaholi: Mkhize | IOL Isolezwe
I-ANC eKZN ayishodelwa abaholi: Mkhize
Isolezwe / 18 December 2012, 1:21pm /
President Jacob Zuma and ANC KZN chairman and Premier, Zweli Mkhize, sing during the provincial cadres forum. This was the last major meeting of the ANC before the partys national conference in Mangaung. Picture: Sibusiso Ndlovu
USIHLALO we-ANC KwaZulu-Natal uthi asikho isidingo sokutatazela ngokuhamba kwakhe uma ethatha isikhundla sokuba nguMgcinimafa kazwelonke kulo mbutho engqungqutheleni eqhubeka eMangaung kuleli sonto.
Izolo emini kuhlalukile ukuthi maningi kakhulu amathuba okuthi uDkt Zweli Mkhize (osesithombeni), asithathe isikhundla sokusingatha ezezimali kaKhongolose. Inhlokomo ananelwe ngayo ngesikhathi kumenyezwelwa igama lakhe kulesi sikhundla, kucacile ukuthi angase abuyele ekhaya lakhe esethwele isikhundla esisha sikazwelonke.
UMkhize utshele Isolezwe emuva kokuqokwa kwakhe ukuthi uthatha lokhu njengophawu olukhonjiswa ngamalungu kaKhongolose ukuthi usevuthwe ngokwanele ukuthi aye kulesi sikhundla. “Noma ngubani oyilungu likaKhongolose ubengasithatha lesi sikhundla nanoma yisiphi esinye kodwa amalungu abona mina ngingomunye ongasiphatha ngobuchule,” kusho uMkhize.
Odabeni lokushiya isifundazwe uMkhize uthe empeleni ngo-2016 ubeyobe esevele engasakulungele ukubuyela esikhundleni sokuba nguSihlalo wesifundazwe noma ngabe uyathanda. “Yihlandla lami lesibili leli njengoSihlalo bengingeke vele ngisabuyela ngo-2016 futhi angazi ukuthi bengizothunywa kuphi ngaleso sikhathi. Yingakho nje sithathe isinqumo sokuthi sivume ukuya lapho uKhongolose asithuma khona,” kusho uMkhize.
Uthe KwaZulu-Natal, kunenqwaba yabaholi emazingeni ehlukene kusukela emagatsheni, ezifundeni kanye nasezingeni lesifundazwe abasebenze kanzima ukubeka uKhongolose lapho ukhona njengamanje.
“Akumina ngedwa umholi kaKhongolose esifundazweni ngoba ngiwuSihlalo. Kunabaholi abaningi asebevuthiwe futhi asebesebenze kanzima bebumba uKhongolose nasezindaweni lapho ubungekho khona. Kunabaholi asebewinele uKhongolose ukhetho. Asishodi ngabaholi, bakhona futhi bayayazi yonke imisebenzi kaKhongolose kulesiya sifundazwe, bayazi ukuthi yini okumele bayenze uma kuphuma oyedwa kumbe ababili ebuholini besifundazwe,” kuchaza uMkhize.
UMkhize uthe okunye uyokwazi ukukhuluma ngakho ngalolu daba emuva kwemiphumela yengqungquthela. “Okwamanje njengoba ingqungquthela isaqhubeka nje kusenzima ukuqagela ukuthi imiphumela yokhetho izoma kanjani. Asikuyekele kumalungu bese emuva kwemiphumela sibone ukuthi ikusasa lisiphatheleni,” kusho uMkhize.
Okunye akubalulile wukuthi ithimba lakhe lezithunywa aliholayo, selicijile ukubhekana ngqo nenqubomgomo abayiphakamisayo. “Udaba lobuholi ezithunyweni zethu aluthathanga sikhathi eside kithina siludingida lusheshe lwahlangana. Esigxile kakhulu kukhona wukucija izithunywa zethu ngokumele zikuphawule kumakhomishini adingida imigomo. Selimi ngomumo lonke kangangoba izithunywa seziyazi ukuthi kumele ziye kumaphi amakhomishini nakufanele akuphawule,” kuchaza uMkhize.
n Khonamanjalo, uma kwenzeka uMnuz Kgalema Motlanthe ekhala ngaphansi uzophephela ekubeni yilungu le-NEC.